သူများမယားငယ်မခံသရွေ့ ကျွန်မကတော့ အေးဆေးပဲ” လို့ ပြောလိုက်တဲ့ ချမ်းချမ်း - Tameelay
သူများမယားငယ်မခံသရွေ့ ကျွန်မကတော့ အေးဆေးပဲ” လို့ ပြောလိုက်တဲ့ ချမ်းချမ်း
နာမည်ကျော် အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပက်သက်လို့ လူစိတ်ဝင်စားမှုခံနေခဲ့ရတဲ့ ချမ်းချမ်းက ဘုဏ်းသိုက်နဲ့ သူမတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ ခံစားချက်အချို့ကို ရင်ဖွင့်လာပြန်ပါတယ်။ သူများမယားငယ်မခံသရွေ့ ကျွန်မကတော့ အေးဆေးပဲ လို့လည်း ချမ်းချမ်းက စကားကုန်ကုန်ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်း သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာမှာ မနေ့ မတ်လ ၁၅ ရက်ကည တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အော်. လူတွေလဲခက်ပါရောလား​မပြောတော့ဘူးနေတာ မကောင်းတာကိုတော့ငြိမ်မခံတတ်လို့ပြောလိုက်ပါဦးမယ် စွာတယ်ပဲပြောပြောပေါ့ကွယ်​တခ့တခါစိတ်တွေလဲကုန်လာတယ် လူတွေကသိပ်ကြောက်စရာကောင်းတာပဲ ကိုယ့်မိသားစုဘဝကိူကျိုးကျေအောင်ဖျက်ဆီးခံရတဲ့လူကို​ကိုယ်ချင်းမစာကြဘူး ကိုယ့်ဘာသာအပြင်ထွက်အကင်ဝယ်တော့လဲဝယ်လို့ ခဏလေးအပြင်ကိုထွက်လိုက်တာနဲ့အတင်းတုပ် Facebookတင်ကြ ဆဲကြ နဲ့။
ကိုယ်ဆိုသူများအကြောင်းစိတ်တောင်မဝင်စားဘူး မအားလို့ ပုံတောင်မတင်ဖြစ်ဘူး ကဲ​ကျမပရိတ်သတ်တွေ မိတ်ဆွေတချို့ရေ ဘာမဟုတ်တဲ့ဘိန်းစားသာသာ အောက်တန်းကျပီးအသက်ကြီးပီးအတင်းတုပ်တတ်တဲ့ မိန်းမပါးစပ်နဲ့ယောကျားတချို့မိန်းမတချို့ကိုခေါင်းထဲမထည့်ပဲနေကြည့်လိုက်ရင်အလိုလိုနေလို့ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့ ကျမဘဝကိုကျမနေရာရောက်တဲ့သူပဲသိလိမ့်မယ် သူများလင်စနိုက်မကြော်သ၍ သူများမယားငယ်မခံသ၍ သူာများမိသားစုကိုဖျက်စီးပီးသူတော်ကောင်းယောင်မဆောင်သ၍ ကျမကတော့အေးဆေးပဲ
ညတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်တိုင်း ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံသလား ကိုယ့်နားကလူတွေ ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတေမင်းလိုလူကိုမပေါင်းတော့မဆက်ဆံကြတော့တာကိုမသိချင်ယောင်ဆောင်ပီး ဘုရားတက် ထမိန်ဝတ်ပီးဟန်ဆောင်နေတဲ့မိန်းမထက်စာရင်တော့​ကျမကလူအမြင်ရိုင်းကောင်းရိုင်းမယ် လိပ်ပြာလုံတယ် မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာခံရမယ် သူများကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်ပီးပျော်နေလို့တော့မရဘူးလေ မသိတဲ့သူတေကိုတော့လိမ်လို့ရလိမ့်မယ်
သူများကိုမကောင်းပြောမယ်ဆို ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်ပြန်စစ်ပါဦးလို့ မကောင်းတဲ့အရာတွေကဖုးံကွယ်လို့မရဘူး ကောင်းတာလုပ်တာကိုလဲဖုးံကွယ်လို့မရဘူး ကုန်ကုန်ပြောလိုက်မယ် ကျမအကြောင်းပြောချင်ရင်အရင်စုံစမ်းလိုက်ဦး မကောင်းတာမလုပ်စားဘူး အေး.မင်းတို့အကျင့်တေလူတိုင်းသိတယ် အေးဆေးနေလို့ကြောက်တယ်လို့တော့မထင်နဲ့ အဆင့်မတူလို့မကြည့်တာသိလား အနုပညာသမားလဲ လူပဲ​ ခံစားတတ်တယ် မကောင်းတဲ့သူကကောင်းစားပီး ကောင်းတဲ့သူတေက ခံနေရတဲ့ခေတ်ပျက် ဒါပေမဲ့ ဘုရားနဲ့တွေ့ရင် ကိုယ်စိုက်တဲ့အတိုင်းပြန်ရိတ်ရတာမမေ့နဲ့ပေါ့ကွယ် မင်းတို့အစားshame on u!
နာမညျကြျော အဆိုတျောတဈယောကျဖွဈပွီး အိမျထောငျရေးနဲ့ပကျသကျလို့ လူစိတျဝငျစားမှုခံနခေဲ့ရတဲ့ ခမျြးခမျြးက ဘုဏျးသိုကျနဲ့ သူမတို့ရဲ့ အိမျထောငျရေးအခွအေနေ ခံစားခကျြအခြို့ကို ရငျဖှငျ့လာပွနျပါတယျ။ သူမြားမယားငယျမခံသရှေ့ ကြှနျမကတော့ အေးဆေးပဲ လို့လညျး ခမျြးခမျြးက စကားကုနျကုနျပွောလိုကျတာဖွဈပါတယျ။ ဒီအကွောငျး သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘှကျစာမကျြနှာမှာ မနေ့ မတျလ ၁၅ ရကျကည တငျထားတာ ဖွဈပါတယျ။
အျော. လူတှလေဲခကျပါရောလား​မပွောတော့ဘူးနတော မကောငျးတာကိုတော့ငွိမျမခံတတျလို့ပွောလိုကျပါဦးမယျ စှာတယျပဲပွောပွောပေါ့ကှယျ​တခ့တခါစိတျတှလေဲကုနျလာတယျ လူတှကေသိပျကွောကျစရာကောငျးတာပဲ ကိုယျ့မိသားစုဘဝကိူကြိုးကအြေောငျဖကျြဆီးခံရတဲ့လူကို​ကိုယျခငျြးမစာကွဘူး ကိုယျ့ဘာသာအပွငျထှကျအကငျဝယျတော့လဲဝယျလို့ ခဏလေးအပွငျကိုထှကျလိုကျတာနဲ့အတငျးတုပျ Facebookတငျကွ ဆဲကွ နဲ့။
ကိုယျဆိုသူမြားအကွောငျးစိတျတောငျမဝငျစားဘူး မအားလို့ ပုံတောငျမတငျဖွဈဘူး ကဲ​ကမြပရိတျသတျတှေ မိတျဆှတေခြို့ရေ ဘာမဟုတျတဲ့ဘိနျးစားသာသာ အောကျတနျးကပြီးအသကျကွီးပီးအတငျးတုပျတတျတဲ့ မိနျးမပါးစပျနဲ့ယောကြားတခြို့မိနျးမတခြို့ကိုခေါငျးထဲမထညျ့ပဲနကွေညျ့လိုကျရငျအလိုလိုနလေို့ကောငျးသှားပါလိမျ့မယျလို့ ကမြဘဝကိုကမြနရောရောကျတဲ့သူပဲသိလိမျ့မယျ သူမြားလငျစနိုကျမကွျောသ၍ သူမြားမယားငယျမခံသ၍ သူာမြားမိသားစုကိုဖကျြစီးပီးသူတျောကောငျးယောငျမဆောငျသ၍ ကမြကတော့အေးဆေးပဲ
ညတိုငျးကိုယျ့ကိုယျကိုပွနျကွညျ့တိုငျး ကိုယျ့လိပျပွာကိုယျလုံသလား ကိုယျ့နားကလူတှေ ပတျဝနျးကငျြကလူတမေငျးလိုလူကိုမပေါငျးတော့မဆကျဆံကွတော့တာကိုမသိခငျြယောငျဆောငျပီး ဘုရားတကျ ထမိနျဝတျပီးဟနျဆောငျနတေဲ့မိနျးမထကျစာရငျတော့​ကမြကလူအမွငျရိုငျးကောငျးရိုငျးမယျ လိပျပွာလုံတယျ မကောငျးတာလုပျရငျမကောငျးတာခံရမယျ သူမြားကိုစိတျဆငျးရဲအောငျလုပျပီးပြျောနလေို့တော့မရဘူးလေ မသိတဲ့သူတကေိုတော့လိမျလို့ရလိမျ့မယျ
သူမြားကိုမကောငျးပွောမယျဆို ကိုယျ့လိပျပွာကိုယျပွနျစဈပါဦးလို့ မကောငျးတဲ့အရာတှကေဖုးံကှယျလို့မရဘူး ကောငျးတာလုပျတာကိုလဲဖုးံကှယျလို့မရဘူး ကုနျကုနျပွောလိုကျမယျ ကမြအကွောငျးပွောခငျြရငျအရငျစုံစမျးလိုကျဦး မကောငျးတာမလုပျစားဘူး အေး.မငျးတို့အကငျြ့တလေူတိုငျးသိတယျ အေးဆေးနလေို့ကွောကျတယျလို့တော့မထငျနဲ့ အဆငျ့မတူလို့မကွညျ့တာသိလား အနုပညာသမားလဲ လူပဲ​ ခံစားတတျတယျ မကောငျးတဲ့သူကကောငျးစားပီး ကောငျးတဲ့သူတကေ ခံနရေတဲ့ခတျေပကျြ ဒါပမေဲ့ ဘုရားနဲ့တှရေ့ငျ ကိုယျစိုကျတဲ့အတိုငျးပွနျရိတျရတာမမနေဲ့ပေါ့ကှယျ မငျးတို့အစားshame on u!
ယနေ့မနက် အကျဉ်းထောင်မှပြန်လွတ်လာသည့် သရုပ်ဆောင်ရဲတိုက်သည် ပုဇွန်တောင် တောင်လုံးပြန်ရပ်ကွက် အမှတ် ၂၀ တွင် မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်ရာ အဆိုပါနေရာသို့ ရဲတိုက်ချစ်ပရိသတ် မိန်ကလေးအချို့ ကြိုဆိုရန် လာရောက်ကြသည်ကို ယခုကဲ့သို့တွေ့မြင်ရပုံ၊ “သမီးတို့ We Love ရဲတိုက်တွေ ဒီမနက်ကမှသိရတော့ နည်းနည်းပါးပါးလောက်ပဲ စုဖြစ်တယ်။ နောက်တကြိမ်တော့ …
သစ်တံခါးကျောင်းတိုက်မှာ ၃ ရက် တရားစခန်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ မင်းသွေး ရဲ့ Video လေးကို အလွမ်းပြေကြည့်ဖို့ တင်ပေးလိုက် ပါတယ်
ဗီဒီယိုကိုအောက်ဆုံးမှာတွဲတင်ပေးထားပါတယ် လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှရှိတဲ့ သစ်တံခါးကျောင်းတိုက်မှာ ၃ရက် တရားစခန်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ မင်းသွေး ရဲ့ Video လေးကို အလွမ်းပြေကြည့်ဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် သူဟာ ဘာသာရေးကို အတတ်နိုင်ဆုံး လုပ်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို Wai Lu Kyaw Foundation နဲ့ လက်တွဲပြီး ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းကြိုးစားပမ်းစား ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ‘ရက်က ၃ရက်ဆိုပေမယ့် …
သဲလေးဆီကနေ အကြီးစားမွေးနေ့လက်ဆောင်ရလိုက်တဲ့ ကိုရွှေထူးကြီး
ဒီနေ့ ၁၉ ရက်နေ့လေးဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားနေတဲ့ အဆိုတော် ရွှေထူးရဲ့ မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကမှ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ Relationship ကို တရားဝင်ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရှိနေပါစေ ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်ပဲ ရှေ့ဆက်ချစ်နေကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ရွှေမှုန်လေးကတော့ ချစ်သူဖြစ်တဲ့ ရွှေထူးကို မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမွေးနေ့ဆုတောင်းမှာတော့ …